ပုံရိပ်အားဖြင့်ရှာရန် - Google ကပြောင်းပြန်ပုံရိပ်ရှာဖွေရေး
သင့်ရဲ့ Android, Computer ကို iPhone & iPad ပေါ်တွင်ပုံရိပ်အားဖြင့်ရှာရန်
ကိုက်ညီပုံများ ကိုတင်ပေးနေ, စောင့်ဆိုင်းကျေးဇူးပြုပြီး ..
ပုံရိပျတင်ခြင်း, စောင့်ဆိုင်းကျေးဇူးပြုပြီး ..
ဒီ website ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်တို့သည်ငါတို့၏ကိုလက်ခံ ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များ။
ReversePix သငျသညျမှာ google အပေါ်ပုံရိပ်များကရှာဖွေပေးနိုင်ပါတယ်။ ရှာဖွေမှုဖျော်ဖြေဖို့ပဲအထက်အပ်လုဒ်ကိုခလုတ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ပုံတင်ပါ။
Google က image ကိုရှာဖွေရေးကိရိယာတခုကဝက်ဘ်ထံမှအလားတူပုံများ, သင့်ရဲ့ image ကိုမဆံ့သောဝက်ဘ်ဆိုဒ်များသည်ပုံ၏ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစား, ပုံရဲ့သတင်းရင်းမြစ်နှင့်ပိုပြီးသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေရန်သင့်အားကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ဘယ်လိုလုပ်လုပ် Google ကပြောင်းပြန်ပုံရိပ်ရှာဖွေရေး
သင်အလွယ်တကူဒီပြောင်းပြန်ပုံရိပ်ရှာဖွေရေး tool ကိုသုံးပြီး google အပေါ်ပုံရိပ်အားဖြင့်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ ဤတွင်ကိုဘယ်လိုဖွင့်::
အဆင့် 1: အထက်က "လွှတ်တင်ခြင်း" ခလုတ်ကိုဖွင့် click ပါ။
အဆင့် 2: အခုဆိုရင်သင်တို့အဘို့တစ်ပြောင်းပြန်ပုံရိပ်ရှာဖွေရေးလုပ်ဖို့ချင်သောပုံရိပ်ကိုရွေးပါ။
အဆင့် 3: သင့်ရဲ့ image ကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းရန်စက္ကန့်အနည်းငယ်စောင့်ပါ။
အဆင့် 4: ထို့နောကျ "ပြသပွဲ". ပေါ်တွင်ရုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ဒါပဲ။ သင်သည်အခြားပြောင်းပြန်ပုံရိပ်ရှာဖွေရေးလုပ်လိုလျှင်ရုံ button ကို "လွှတ်တင်ခြင်း" ပေါ်တွင် click လုပ်ပါ။
သငျသညျဤပုံဤရှာဖွေရေးကိရိယာတခုနှင့်အတူအလွယ်တကူအများအပြားအံ့သြဖွယ်အမှုတို့ကိုပြုနိုင်ပါတယ်။ ရုံသင်သည်သင်၏ပုံရိပ်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ပုံရိပ် upload ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီနေရာတွင်ဒီ tool နှင့်အတူအဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ဖြစ်ပါသည်:
အမြင်အားဖြင့် ပို. အလားတူ Images ကိုရှာပါ
ရဲ့သင်တစ်ဦးနောက်ခံပုံများသော်လည်းသင်ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားနှင့်ပိုပြီးအရည်အသွေးမြင့်နဲ့ဆင်တူ image ကိုရှာဖွေချင်တယ်စိတ်ကူးကြပါစို့။ ဤသည်ပြောင်းပြန်ပုံရိပ်ရှာဖွေရေး tool ကိုသငျသညျအရည်အသွေးမြင့်နှင့်အတူအလားတူရုပ်ပုံများကိုချက်ချင်းရနိုင်တယ်။
ဒီတစ်ခါလည်းသင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကို အသုံးပြု. ပေမယ့်တစ်စုံတစ်ဦးကိုသင်သိကြပါဘူး။ ထိုအခါဒီ tool ကိုသင်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးပုံတစ်ပုံကိုအသုံးပြုပြီးသောဝက်ဘ်ဆိုဒ်များသို့မဟုတ်ဘလော့ဂ်ကိုကူညီရှာဖွေပေးနိုင်သည်။
သငျသညျဆိုပါကလူများ, နေရာအရပ်များနှင့်ထုတ်ကုန်များ၏ပုံရိပ်တစ်ခုပေမယ့်သူတို့ကိုသင်အကြောင်းကိုမသိရပါဘူး။ သင်အလွယ်တကူဖွင့်ပုံကိုတင်သူတို့အားပုံရိပ်တွေအကြောင်းကိုချက်ချင်းနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
အတု Accounts ကိုရှာပါ
အခုဆိုရင်သင်အလွယ်တကူတချို့အတု Facebook က, Instagram ကိုဆိုရှယ်မီဒီယာ profile များကိုပေါ်တွင်သင်၏ပုံရိပ်သုံးပြီးနေသောလူမျိုးရှာပြီးလုံခြုံသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဂုဏ်သတင်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်သူတွေကိုပရိုဖိုင်းကိုသတင်းပို့လို့ရပါတယ်။
website ရဲ့ backlink အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပါ
တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ရဲ့အားထုတ်မှုကိုတန်ဖိုးထားခြင်းမရှိဘဲ၎င်းတို့၏ဘလော့ဂ်သို့မဟုတ် website တွင်သင့်ရဲ့ image ကိုသုံးပြီးရှာပါ။ သင့်ရဲ့ site ကိုမှ link တစ်ခုအဘို့ထိုသူတို့မေးပါနှင့်ပြောင်းပြန်ပုံရိပ်ရှာဖွေရေးနှင့်သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏အကြီးအ SEO ဆိုသည်မှာအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။